‘शक्ति र विकासे मन्त्रालयमा हारालुछ चल्छ’ : पूर्वसचिव रेग्मी- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए ।
परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् ।
चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीसँग गरिएको कुराकानी :
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जहिल्यै मन्त्रालयको भागबन्डामा समस्या किन हुन्छ ?
मन्त्रालय तानातान एउटा मुख्य कारण हो । हामीकहाँ तीन किसिमका मन्त्रालय छन् । गृह, रक्षा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय पहिलो नम्बरको शक्ति प्रयोग गर्ने मन्त्रालय हुन् । २ नम्बरमा विकासे मन्त्रालय पर्छन्, जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी, कृषि, शिक्षा, खानेपानीजस्ता मन्त्रालय पर्छन् । यिनमा प्रशस्त काम हुन्छ । काम देखाउन पाइने र त्यसले प्रभाव पनि पार्न सकिने सोच हुन्छ । त्यसपछि सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पर्छन् ।
श्रम, महिला तथा बालबालिका, पर्यटन, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय यसमा पर्छन् । पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय प्रभावशाली मानिथ्यो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि यसको आकर्षण घटेको छ । सत्तामा सामेल दलहरू सबैले शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालय नै लिन खोज्छन् ।
निर्वाचन आउन लागेकाले पनि हो कि ?
त्यो पनि हो । चन्दा संकलन गरेर मात्रै चुनावको खर्च धान्न सक्दैनन् । विकासे मन्त्रालयमा इमानदारीका साथ काम गरे पनि कमिसन आउँछ । भ्रष्टाचार नगरी पनि आर्थिक स्रोत जम्मा हुन्छ । ठेक्कापट्टाका काममा ठेकेदारले यसै कमिसन दिने गर्छन् । यति मात्रैमा सीमित भए पनि ठिकै हुन्थ्यो । तर यहाँ त ठेकेदारलाई बोलाएर यतिमा ठेक्का हाल, म मिलाउँछु । मलाई यति लेऊ भनेर मन्त्रीहरूले भन्छन् ।
कमिसन त पञ्चायतकालमा पनि दिन्थे । अहिले हाकाहाकी माग्ने गर्छन् । कर्मचारी चाँडै सरुवा गर्ने कारण पनि यही हो । कर्मचारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सचिवले मानेनन् भने सरुवा गरिदिने चलन विकसित छ । यसलाई कतिपयले राजनीतिक आवरण दिने गर्छन् । राजनीतिक आस्था मिल्ने मान्छेलाई ल्याउने भन्ने गरिन्छ, तर होइन । जेमा भन्यो, त्यसैमा सही गरिदिने, वाद–प्रतिवाद नगर्ने कर्मचारी मन्त्रीले खोज्छन् ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ हुनुमा अरू के कारण होलान् ?
एमाले फुटेर अहिलेको सरकार बनेको हो । सरकारलाई चुनावसम्म स्थिरता दिनुपर्ने थियो । फुटेको एमालेलाई कानुनी दलको मान्यता दिन अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो । नत्र स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले सरकारलाई सहयोग गर्न माधव नेपालले पाइरहने अवस्था थिएन । ह्वीप मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो पटक अदालतमा परेको मुद्दाले पनि ढिलाइ गरिदिए जस्तो लाग्छ । १४ जना सांसदमाथि कारबाही हुने कि नहुने ? सांसद नरहने हो भने सरकार त्यही किसिमले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मान्यता दियो भने त्यही हिसाबले जानुपर्ने होला ।
मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर कांग्रेस र माआवादी केन्द्रबाट पदपूर्ति हुन सक्थ्यो । उनीहरूमा पनि आन्तरिक झमेला छ कि भन्न अनुमान छ । अर्को कुरा अध्यादेशले पनि समस्या ल्याएको छ । अध्यादेश आपत्कालीन ल्यान्डिङ थियो । यो स्थायी उपचार होइन । अहिले भइरहेको अध्यादेशको स्थायी समाधान नहुँदासम्म जसपालाई कठिनाइ परेको छ । पाँच सदस्यले जसपा विभाजन गर्न सक्ने अवस्था छ । यसले पनि अप्ठ्यारो परेको होला ।